Javier Marías anotendeuka 65 nhasi | Zvazvino Zvinyorwa
Javier Marías anotendeuka 65 nhasi
Munyori kubva kuMadrid, mushanduri, mupepeti uye nhengo yeRoyal Spanish Academy kutora iyo chigaro «R», Javier Marías anotendeuka 65 nhasi. Akasarudzwa kuve nhengo yeRoyal Academy muna 2006, kunyanya munaJune 29, pakupedzisira achitora chigaro muna Kubvumbi 27, 2008.
Muna 2012, Javier Marías Akapihwa mubairo weNational Prize weSpanish Narrative, mubairo wakapihwa nebazi rezvetsika nemagariro. Munyori akaramba mubayiro wakadai nemazwi anotevera:
«Ndinotenda mutsa wejuri uye ndinovimba kuti chinzvimbo changu hachina kutorwa sechakashata asi ndiri kuenderana nezvandagara ndichitaura, kuti handingambowana mubairo wesangano. Dai PSOE yanga iine simba, ingadai yakaita zvakafanana ... ini ndakaramba mari yese yaibuda muhomwe yeruzhinji. Ndakataura pazviitiko zvakawanda kuti kana ndikapihwa, handikwanise kugamuchira chero mubairo ». Rondedzero inogona kuve yakanyanya kuderera kana kuderera zvinoenderana neruzhinji maonero, zvinonyanya kucherechedzwa kuti vashoma vanyori vane tarisiro yakafanana yemari yeruzhinji yeSpanish.
1 Yakasarudzika novel uye rondedzero munyori
1.1 Nhoroondo dzake
2 Mitsara uye rumwe ruzivo nezve Javier Marías
Yakasarudzika novel uye rondedzero munyori
Javier Marías ane chinyorwa chakakura kwazvo chekunyora, nekuti akanyora kubva pane pfupi nyaya kuenda kuzvinyorwa zvevanyori Asi panoonekera basa rake chairo riri mumhando dzemanyowani nezvinyorwa.
"Nzvimbo yemhumhi" (Edhasa, 1971)
"Kuyambuka kumusoro" (The Gay Science, 1973)
"Mambo wenguva" (Alfaguara, 1978)
"Zana ramakore" (Seix Barral, 1983)
"Munhu ane rudo" (Anagram, 1986)
"Mweya yese" (Anagram, 1989)
"Moyo wakachena kudaro" (Anagram, 1992)
«Mangwana kuhondo funga nezvangu» (Anagram, 1994)
"Nhema kumashure kwenguva" (Alfaguara, 1998)
"Chiso chako mangwana" (Alfaguara, 2009), kuunganidzwa kwemabasa matatu anotevera: «Fivhiri nepfumo » (Alfaguara, 2002), «Kutamba uye kurota » (Alfaguara, 2004), «Chepfu nemumvuri uye kuonekana » (Alfaguara, 2007)
"Kupwanya" (Alfaguara, 2011)
"Aya ndiwo matangiro anoita zvakaipa" (Alfaguara, 2014)
«Nyaya dzakasarudzika» (Siruela, 1989)
"Zvakanyorwa hupenyu" (Siruela, 1992)
"Iye murume airatidza kuti hapana chaari kuda" (Spain, 1996)
«Vanotarisira» (Alfaguara, 1997)
"Faulkner naNabokov: Masters maviri" (Depocket, 2009): «Kana ndikamuka zvakare » naWilliam Faulkner (Alfaguara, 1997), «Kubva zvandakuona uchifa » NaVladimir Nabokov (Alfaguara, 1999)
"Wellesley's Don Quixote: Zvinyorwa zveKosi muna 1984" (Alfaguara, 2016)
Mitsara uye rumwe ruzivo nezve Javier Marías
Kana iwe uchida basa rekunyora remunyori Javier Marías uye iwe uchida kuziva zvakawanda nezve zvese zviri zviviri munyori uye zvinyorwa zvake, unogona kuzviita pano, webhusaiti yayo yepamutemo. Tevere, tinokusiya iwe uine mamwe emitsara yake uye ne vhidhiyo apo munyori iye pachake anotaura nezve "njodzi yekudonha murudo", mukuratidzwa kwenoverengeka yake "Kupwanya" (2011). Nakidzwa nayo!
"Chikoro microcosm inounza pamwechete ese marudzi epfungwa: gwara, vanokudzwa, mapenzi, vakaipa ... Zvinokosha kuti uzive vanhu."
"Hapana anobvuma nekuti zvinhu dzimwe nguva zvinoitika pasina munhu ane mhosva, kana kuti kune rombo rakanaka, kana kuti vanhu vanokanganisa nekuzvikanganisa uye vanotsvaga nhamo kana kuzviparadza."
“Pave nezana remakore vana vadzidziswa kuva vanhu vakuru. Chaizvoizvo zvinopesana: vakuru venguva yedu vakadzidziswa kuramba vari vana.
"MuSpain, basa remusiki mufananidzo wemumwe munhu ari mumvura uye anotambura kubuda apo vamwe vachimusundidzira pasi."
"Handisati ndambova monarchist, uye handichazove, pasina mubvunzo, asi ini ndinofunga kuti mufananidzo waMambo, kana Mambo uyu, zvirinani, wakabatsira zvikuru."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Javier Marías anotendeuka 65 nhasi
ndokumbirawo ubve pamudyandigere
Mabhuku aPapa Francis avanoda
Kune mudzidzisi, Spanish anthology yekuremekedza Terry Pratchett